Somaliland oo rabta iney dekedda Berbera ku wareejiso shirkad shisheeye – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Somaliland oo rabta iney dekedda Berbera ku wareejiso shirkad shisheeye
15th February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Maamulka Somaliland ayaa doonaya inuu shirkad shisheeye ku wareejiyo dekedda magaalada Berbera, waxaana qorshahaas ka dhashay muran iyo mucaaradad.
Wasiirka madaxtooyada Somaliland, Xirsi Cali Xaaji Xasan, ayaa sharaxay qorshe dekedda Berbera loogu wareejinayo shirkad shisheeye, kadib marka tartan loo qabto shirkado badan oo daneynaya iney maamulkaan dekeddaas.
Wasiirku waxa uu beeniyay warar sheegayay in wasiiro xukumadda ahi kala wataan shirkaddaha danaynaya dekedda Berbera islamarkaana isku khilaafsan yihiin cidda lagu wareejin lahaa.
Sidoo kalena eedaha dadweynaha iyo nucaaradka ee ka soo horjeeda wareejinta dekedda ayuu ku sheegay dad Iimaan la’aani qaaday oo aan waxba hubsan.
“Shirkaddo la kala boobayo iyo wax la kala jiidanayaa ma jiro, waxaanu annagu ku kala dooranaynaa Maxay dhaqaale galinayaan, Ganacsiga ay ka qabanayaan waa maxay?, Maxay Macaamiisha ku soo jiidanayaan?, Tayada ay ku dhisayaan waa maxay?” ayuu yidhi Wasiir Xirsi oo BBC-da u waramayay
Wasiirku waxa uu sharaxay sababta xukumaddu shirkaddo shisheeye ugu wareejinayso dekedda qaranka ee Berbera “Waxaanu doonaynaa inay dekedda Berbera noqoto deked kuwa adduunka oo kale ah, oo kuwa dunida la tartanta, sidaas darteed waxaanu eegaynaa cidda ay waafaqdo Qarankan dantiisu, ee wax la qaban karta ayaanu eegaynaa”
Wasiirku waxa uu iftiimiyay cidda dekedda wareejinaysa “Waxaa jirta Guddi Madaxweynuhu u saaray oo Wasiiro ah oo aan ku jiro, oo wasiirka Khaarajigu ku jiro oo Wasiirka Qorshayntu ku jiro, oo eegaya, darsayana shirkaddaha noocaas ah, waxaana laga yaabaa in marka shirkaddaha warkoodu soo ururo in qandaraas lagu bixiyo oo la baahiyo”
Wasiirka Madaxtooyadu waxa uu ku dooday inaan dekedda ciyaar lagu wareejinayn balse laga fiirsanayo “Waxay ila tahay Berbera wax go lagu qaado ka wayne, Bebrera wax ciyaar-ciyaar lagu wareejiyo ka wayn oo waa Marsadii Qaranku lahaa, markaa waa laga yaabaa in dad aan waxba hubsan oo mucaarad iyo muxaafad midkuu doono ha ahaadee oo aan wax na waydiini inay meelahaas ka hadlaan”
Wasiirku waxa uu sheegay inay ilaa haatan Afar Shirkaddood danaynayaan Hawlaha Berbera “Shirkad caan ah oo Dubai leedahay dannaynteeda ayay muujisay, sidoo kale waxaa dekedda raba shirkadda Bolore (Shirkad Faransiis ah) waa shirkad caan ah, Shirkad kale oo African ah oo Sucuudiga joogta iyaguna danayntooda ayay muujiyeen oo way doonayaan, Shirkad kale oo Kuwait leedahayna way doonaysaa dekedda Berbera, Annaguna waxaas oo dhan waanu tartan siinaynaa waxaanu eegaynaa wixii danta Qaranka loo arko” ayuu yiri Wasiir Xirsi.
Dekedda Muqdisho ayaa waxaa horay dowladda Soomaaliyaa ugu wareejisay shirkad Turki ah, taasoo lagu magacaabo Albeyrak, waxaana markii shirkadaas ka shaqo bilowday dekedda kasoo xerooday dakhli aad uga badan kii ay ka keeni jireen ragii Soomaalida ahaa meesha horay usoo maray.
Wariyaasha Shabeelle & Sky oo maanta kasoo muuqanaya maxkamad
Wasaaradda Maaliyadda oo loo jeediyey iney la timaado qorshe lagu daabacayo lacag cusub